Amerika. I Amerika dia anisanny kaontinenta dimy, ny ranomas
Fiteny loup A
ⓘ Amerika. I Amerika dia anisanny kaontinenta dimy, ny ranomasina mamaritra azy dia ny ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny ranomasimbe Atlantika any atsinanany ..
Mponina miaina any Etazonia ny Shawnee. Ao anatiny staty ny Ohio, ny Kentucky, sy ny Pensylvannia. Nisy tanana Shawnee kely tany aminy Illinois hatrany amini New York, tonga hatrany Georgia Amerika ny Shawnee. Teny Algônkiana ny teny Shawnee ; manakaiky ny Mesquakie sy ny Kickapoo. Chaouanon no anarana nomenny Frantsay azy taloha
I Kraiba dia faritra any Amerika voafaritry ny Ranomasina Karaiba, ao atsimo-atsinanan ny helodranon i Meksika sy atsio-atsinanan i Amerika Afovoany ary ao avaratr i Amerika Atsimo no misy an io faritra io. Ahitana nosy miisa 700 any ho any ny ao amin io faritra io. Mizara faritra roa i Karaiba, dia i Karaiban ny nosy sy ny Karaiba an-tanibe.
Ny Mandan dia foko teratany ny amerika miaina eny anilanny renirano Missouri. Ao anatinny firenena amerikana ny Dakota Avatratra, sy Dakota atsimo. Ny Mandan no mponina isanny nanao tanàna any aminny tany lemaka ny Amerika Avaratra. Mihazana omby be sy mivarotra ny mandan.
Ny fiteny amerinda dia fianakaviam-piteny tsy voaporofo fisiana izay narosoni Joseph Greenberg tao aminny bokiny hoe Language in the Americas. Mamondrona ny fiteny amerindiana rehetra tsy isan ny fiteny eskimô-aleota tsy isan ny fiteny na-dene. Ny faritra itsinjarany dia any Kanada sy any Amerika Atsimo. Amin i Greenberg dia mamorona fianakaviambem-piteny ireo fiteny ireo noho izy ireo misy mpisolo tena voalohany ahitana ny renifeo. Maro anefa ny mpahay teny tsy manaiky ny fisian izany fianakaviam-piteny izany.
I Amerika dia anisanny kaontinenta dimy, ny ranomasina mamaritra azy dia ny ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny ranomasimbe Atlantika any atsinanany, ny ranomasimbe Arktika any avarany ary ny ranomasimbe Atsimo any atsimony. Ny faritany tena misongadina dia i Amerika Avaratra sy i Amerika Atsimo. Ireo faritra roa ireo dia voasaraky ny andilan-tanini Panama.
Aminny lafiny ara-jeografia, ny velarantaniny dia 42 tapitrisa km 2 ary ny isanny mponina dia 930 tapitrisa eo ho eo araka ny fanakekezana natao taminny taona 2009.
I Amerika Avaratra avy aminny farany avaratra hatraminny farany atsimo dia mirefy 15 000 km. Raha isaina avokoa ny velarantany manontoloni Amerika Avaratra Sy ny velarantany manontoloni Amerika Atsimo dia kontinenta faharoa lehibe indrindra eto an-Tany i Amerika velarantany manontolo: 42.44 tapitrisa km². Avy aminny lafiny andrefana hatrany aminny lafiny atsinanana dia ahitana karazan endri-paritra telo:
Ny morontsiraka andrefana dia ahitana tendrombohitra avo mahatakatra hatrany aminny 6 959 m ny tendrombohitra Aconcagua: ao Amerika Atsimo no ahitana ny tangorombohitra lava indrindra ivelan-dranomasina 6 000 km ny avy any atsimo mianavaratra.
Eo aminny morontsraka atsinanana indray no ahitana tany lemaka. Misy ihany ny tendrombohitra anefa ny haavony dia tsy mihoatra ny 3 000 m mihitsy; ohatra izao ny tangorombohitri Appalaches any avaratra, na ny tany avo brazilianina any atsimo.
Ny faritra afovoanny kontinenta amerikanina roa indray dia ahitana na tany lemaka eo aminny faritra afovoanny Amerika Avaratra, na alabe rehefa manakaiky ny Fehibe alani Amazonia, any Amerika Atsimo. Ny toerana misy anireo tany lemaka sy alabe ireo dia tany lemaka iva ikambananny renirano bassin.
1.1. Jeografia Ny mponina
Ny isanny mponini Amerika dia marikitra ny 930 tapitrisa eo taminny 2009. Ny isanny mponiny aminizao fotoana izao dia in-jatonny isanny mponiny vao zato taona lasa izay. Izy io dia noho ny fifindra-monina ary ny fitomboanny isanny mponina ao aminny faritra atsimoni Amerika ary eo aminny faritra Karaiba.
Ny toerana ipetrahanny ankamaroanny mponina ao Amerika dia ireo tanàna eo aminny faritra amorontsiraka, ahitana ny tanàna lehibe indrindra eto an-tany
Ny mponina tonga voalohany tao Amerika, izay antsoina hoe "Teratanini Amerika" na Amerindianina dia miisa eo aminny dimampolo tapitrisa eo ho eo. Izany hoe mahery kelinny 5% ny isanny mponina manontolo. Ny teny tenenina indrindra ao Amerika dia teny eoropeanina avokoa. Ny fiteny amerindianina be mpiteny indrindra dia ny fiteny ketsoà frantsay / anglisy / espaniola: quechua izay arahinny fiteny nahoatla.
2. Ny firenena ao Amerika
Firenena ao Amerika Afovony
Firenena ao Amerika Atsimo
Terataninny Amerika Afovoany
Huaxteka Jicaques Maya Azteka Guaymis Lenca Guachichils Conchos Mam Tzotzil Quiché Tzeltal Tojolabal Mosquitos Chol Papagos Teotihuacan Tepehuas Tarahumars Taraska Zapoteka Olmeka Tépaneka Mazateka Pipil Zôka Tolteka Mixteka Ulvas Pames Otomi Totonaka
Ny Ojibway dia ilay firenena ngeza indrindra any Amerika Avartra ; miaraka aminy metis, izy fahatelo rehefa miresakanilay gropy ngeza indrindra any Etazonia ; ao arinani Cherokee sy ny Navajo ; mitovy ny fivelaram-ponina ny Ojibway any etazonia sy any Kanada. Miaina any avaratra ny Lac Supérieur ny Ojibwe, any Sault-Sainte-Marie.
Ny Fiteny seienina dia fiteny amerindianina tenenina ao aminny faritra afovoani Etazonia. Foko roa miaraka ny saienina: Sótaae ary ny Tsé-tsêhéstâhese avy aminny Tsêhéstáno), izay midika hoe "olona sahala isika" aminny teniny. Ny teny saienina dia avy aminny teny lakota šahíyena izay midika šahíya kely.
Ani (Taratasy Georgianina)
Ani is the 1st letter of the three Georgian scripts. Ao aminny rafi - zeorziana tarehimarika io dia manana ny lanjany 1. Ani matetika maneho ny hanokafana foibe unrounded zanatsoratra /a, toy ny fanononana teny nyEndrika:Angle bracket ao aminny "f ny apokalypsy".